सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यले मात्र कोभिडले सिर्जना गरेका चुनौती सामना गर्न सकिन्छ «
सरकार, निजी क्षेत्रको सहकार्यले मात्र कोभिडले सिर्जना गरेका चुनौती सामना गर्न सकिन्छ
कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव र असरलाई अन्त्य गरी पहिलाकै अवस्थामा वा यसको पुनरुत्थानमा सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले जोड दिइरहेका छन् । सरकारले यसका लागि विभिन्न राहत प्याकेज ल्याएको छ भने निजी क्षेत्रले सरकारले ल्याएको राहत सकारात्मक भए पनि यो अपूर्ण रहेको बताउँदै आएको छ । निजी क्षेत्रले त पुनरुत्थानलाई केन्द्रित गरेर विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्ने बताइरहेका छन् । सरकारले कोभिडको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि निजी क्षेत्रको सहकार्यका लागि आफूहरू तयार रहेको बताउँदै आएका छन् । निजी क्षेत्रको लगानीको वातावरण निर्माण, रोजगारीको सिर्जनालगायतमा आफूहरूको जोड रहेको र यसमा सरकारको प्राथमिकता रहेकाले यसमा सरकार उदार हुनुपर्ने तर्क छ । कोभिड न्यूनीकरणका लागि सरकारले खेलिरहेको भूमिका र अगाडि बढाउनका लागि चालेको कदम तथा निजी क्षेत्रले गरिरहेको प्रयास र यसमा सरकारको साथबारे अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका साथै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिश मोर र चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले व्यक्त गरेका विचारको सार :
कोभिड प्रभाव न्यूनीकरण गर्न निजी क्षेत्रको सहकार्य अपरिहार्य
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण अर्थतन्त्रमा परेको असर न्यूनीकरणका लागि सरकारले अग्रभागमा रहेर भूमिका निर्वाह गरेको छ । कोभिडले विश्वव्यापी रूपमा जुन प्रकारको चुनौती सिर्जना गरेको छ, हाम्रो अर्थतन्त्रलाई पनि यो सर्वाधिक चुनौतीको विषय हो । कोभिडले सबै क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर पर्दा मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा धेरै नै ठूलो असर पारेको छ । कोभिडले सिर्जना गरेको चुनौतीका निम्ति सरकारले अग्रभागमा रहेर भूमिका खेल्नका लागि तत्पर रहेको छ । सँगसँगै मैले यो अनुरोध पनि गर्छु कि सरकारले मात्र एक्लै गर्न नसक्ने भएकाले यसका निम्ति निजी क्षेत्रको सहकार्य धेरै महŒवपूर्ण रहेको छ । सरकार, निजी क्षेत्रको घनिष्ठ सहकार्यले मात्र कोभिडले सिर्जना गरेका चुनौतीलाई सामना गर्न सकिन्छ । विशेषगरी अहिले लगानी वृद्धि, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित हुनुपर्नेमा आवश्यकता छ । त्यसतर्फ हामी सहयात्रा गर्नेछौं । हाम्रो नेपाली अर्थतन्त्रलाई चलायमान, गतिशील बनाउने र अहिले देखापरेको कठिन चुनौतीलाई सामना गर्दै लगानी, उत्पादन र रोजगारी वृद्धिमा केन्द्रित भएर अर्थतन्त्रलाई सफल तुल्याउने दिशातर्फ हामी अगाडि बढ्नेछांै ।
म अर्थमन्त्रीका हैसियतले भन्न चाहन्छु, म त्यस रूपमा अगाडि बढ्न चाहन्छु । त्यसका निम्ति निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि संगठनहरू, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शजस्ता संस्थाहरूसँग मेरो घनिष्ठ सहकार्य हुनेछ । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) लगायतका आर्थिक क्षेत्रमा कलम चलाउने सञ्चारकर्मी साथीहरूसँगै आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरूसँग पनि सहकार्य गर्न चाहन्छु । सरकारले कोभिडको सामना गर्ने सन्दर्भमा चाहे बजेटको माध्ययमबाट होस्, चाहे मौद्रिक नीतिको माध्यमबाट होस्, केही सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । यसमा पर्याप्त नहुन सक्छ । यसलाई पर्याप्त बनाउनका लागि के गर्नुपर्ला, निजी क्षेत्रको रचनात्मक सुझावको आवश्ययकता छ । हाम्रो चुनौतीहरूका बीचमा सामन्जस्यताको खाँचो पर्छ । चुनौती र सामन्जस्यताका बीचमा सन्तुलन कायम गर्न निजी क्षेत्रको सुझावलाई नीति निर्णयमा बदली कार्यान्वयन गर्न सहकार्य गर्न तत्पर छु । सरकार, निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रबीचको सहकार्यमा कोभिडले सिर्जना गरेका चुनौतीहरूको सामना गर्दै लगानी वृद्धि गर्ने, उत्पादन बढाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बेला आएको छ । अर्थतन्त्रलाई अहिलेको स्थितिबाट माथि उकास्न र चलायमान बनाउन अहिले उत्पन्न भएका समस्याहरूको समना गर्दै लगानी, उत्पादन र रोजगारी वृद्धिमा केन्द्रित भएर सरकार अगाडि बढिरहेको छ । कोभिडले पारेको प्रभावलाई माथि उठाई अर्थतन्त्र चलायमान गर्नका लागि सरकारी तवरबाट प्रयास भइरहेको छ ।
समुन्नत मुलुक निर्माणका लागि १० वर्षे रणनीति तयार गर्न लागेका छौं
कोरानो भाइरस (कोभिड–१९) ले गर्दा कहिले भोग्नु नपरेको आर्थिक, सामाजिक र स्वास्थ्य समस्यासँग हामी गुज्रिरहेका छौं । यसबाट सबैभन्दा बढी, साना र मझौला उद्यमी प्रभावित भएका छन् । अन्य व्यवसाय पनि पुरानो अवस्थामा अझै फर्किसकेका छैनन् । यस वर्ष पनि एक प्रतिशत वा सोभन्दा कम आर्थिक वृद्धिदर गर्ने भन्ने छ । विश्व बैंकले त ०.६ प्रतिशत हुने बताएको छ । यसैबीचमा लकडाउनका कारण बारम्बार स्थगन भएको महासंघको वार्षिक साधारणसभा भई निर्वाचन पनि सम्पन्न भएको छ । नयाँ टिम आएको छ । मैले पनि यस्तो गरिमामय संस्थाको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको छु । सबैबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न विशेष कार्यक्रमको आवश्यकता रहेको छ । अबको दिनमा समुन्नत मुलुक निर्माणका लागि हामीले रणनीति बनाएर काम गर्ने प्रयास गरेका छौं । यसमा सरकारको सहयोग हामीलाई चाहिन्छ । अर्थमन्त्रीज्यू र गभर्नरसा’बसँग यसबारेमा छलफल पनि गरिसकेका छौं । १० वर्षे रणनीति–पत्र तयार गरेका छौं । आगामी १ सय दिनभित्रमा यसलाई अन्तिम रूप दिई सार्वजनिक गर्ने योजना छ । दिगो आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको मुख्य स्रोत निजी क्षेत्र नै रहेको छ । समुन्नत मुलुक निर्माणमा निजी क्षेत्रको भन्दा बढी योगदान पु¥याउन व्यावसायिक वातावरण अपरिहार्य रहेको छ । दोहोरो दरको आर्थिक वृद्धि, वार्षिक ४ लाख युवालाई रोजगारी सिर्जना, व्यापारघाटा नियन्त्रण गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सरकार वा अन्य सरोकारवाला निकायसँग पहल गर्नुका साथै आफ्नो तर्फबाट पनि योगदान गर्न चाहन्छु । हाम्रो रणनीति–पत्रमा समावेश भएका मुख्य बुँदाहरूमा पहिलो कोभिड–१९ को प्रभाव कम गरी अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।
बजेट र मौद्रिक नीतिले व्यवसायीलाई केही मात्रामा राहतका कार्यक्रम ल्याए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । त्यसैले पनि कोभिड पुनरुत्थान विशेष कार्यक्रम ल्याउन अति आवश्यक छ । यसमा प्रत्यक्ष अनुदान, राजस्व छुट, साँवा–ब्याज भुक्तानीको अवस्था, श्रमिक व्यवस्थापनको कुरा समेटिनुपर्छ । विभिन्न क्षेत्रमा आवश्यक राहत कार्यक्रम र तिनको कार्यान्वयनबारे सरकारसँग कार्यान्वयन गर्न रणनीति–पत्र तयार गरिएको छ । पछिल्लो दशकमा कृषि क्षेत्रको उत्पादन ३.२ प्रतिशत मात्र रह्यो । २०६५ मा ७४ प्रतिशत जनता कृषिमा आश्रित रहेका थिए । २०७६ मा ६० प्रतिशत कृषिमा आश्रित छ । यसमा आश्रितको संख्या घट्दै जानु अर्थतन्त्रका लागि नकारात्मक मानिँदैन । तर, जनशक्ति उत्पादनमूलक र सेवामूलकमा जान सक्यो भने अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक हुन्छ । अहिले कृषिमा पनि आंशिक रोजगारी सिर्जना भएको छ । यसबाट बाहिरिएका जनशक्ति विदेशमा कार्यरत छन् । तिनलाई मुलुकमा ल्याउन आवश्यक छ । साना र मझौला उद्योगलाई कोभिड–१९ को प्रभावबाट बाहिर ल्याउन सबैभन्दा बढी सहयोग आवश्यक पर्छ । ती उद्यमीहरूलाई बाहिर ल्याउन मेरो धेरै ठूलो जिम्मेवारी पनि रहेको छ । त्यसैगरी नयाँ उद्यमका लागि पुँजी, प्राविधिक सहयोग पु¥याउने संयन्त्रको आवश्यकता छ । परियोजनाकर्जालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइन्छ । लगानीवृद्धि, रोजगारी विस्तार र व्यवसाय वातावरण सुधारका लागि एक दर्जनभन्दा बढी नीति एवं कानुनहरू सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ । व्यवसाय दर्ता, सञ्चालन, नवीकरण, राजस्व भुक्तानी र बन्द गर्नुपर्ने देखिएका व्यावहारिक समस्या सुधारको आवश्यकता देखिएको छ । त्यसैगरी निर्यात बढाउन केही अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्झौताको पुनरावलोकन एवं विस्तारका विषय पनि रणनीतिमा समेटेका छौं । त्यसैगरी वातावरणीय प्रभाव साथै महामारीको समस्या सम्बोधन गर्न पनि नीतिगत सुधार गर्न आवश्यक छ । यस रणनीति कार्यान्वयनका लागि अर्थमन्त्री, गभर्नरसा’ब र सरोकारवाला निकायको सहकार्यबिना सम्भव छैन । हामी अहिले समस्यामा रहेकाले समाधान गर्नका लागि सबैको सहकार्य अति आवश्यक हुन्छ ।
राहत र पुनरुत्थानका कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनुपर्छ
कोभिडको प्रतिकूल अवस्थामा पनि केही सूचकहरू राम्रै देखिएकाले आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । उच्च मनोबल बनाएर लगानी वृद्धि गर्न निजी क्षेत्रलाई सरकारले प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । अहिले निजी क्षेत्रलाई विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्छ भनेर हामीले भनिरहेका छौं । त्यसको फलस्वरूप रेमिट्यान्स पनि बढेको छ । यता सेयर बजार पनि चलायमान भएको छ । यसलाई निरन्तरता दिएर निजी क्षेत्रसँग बढी सहकार्य गर्ने वातावरण बनाएर मिनोबल उच्च बनाइयो भने कोभिड–१९ लाई एउटा अवसरका रूपमा पनि लिन सकिन्छ । धेरै क्षेत्रहरू कोभिडले प्रभावित भएका छन् । यी समस्यालाई अवसरको खोजी पनि गरौं । सरकार, सरोकारवाला निकायसँग हामीले कसरी राम्ररी काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न आवश्यक छ । कोभिड–१९ ले सिर्जना गरेको विश्वव्यापी संकट तथा राष्ट्रिय आर्थिक संकटमा जोडिएका छौं । यसको अवस्थालाई कसरी सामना गर्ने चुनौती सबैमाझ आइपरेको छ । कोभिड संकटले सिर्जना गरेको संकटबाट पार पाउन तथा अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग निरन्तर छलफल भइरहेको छ । हालको संकटमा व्यवसायलाई सजिलो बनाउनका निम्ति स्वदेशी र विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि कतिपय ऐन–कानुनका दफाहरूलाई संशोधन वा खारेज गर्न आवश्यक छ ।
कोभिडले पारेको प्रभाव कम गर्नका लागि सरकारले आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रम ल्याउन अति आवश्यक छ । नेपाल सरकारसँग निजी क्षेत्रका व्यवसायीले सहकार्य गरेर काम गर्ने वातावरण सिर्जना हुन आवश्यक छ । आजको दिनमा आर्थिक पुनरुत्थान साझा एजेन्डा हो । यसलाई अगाडि बढाउन दबाब दिनु आवश्यक छ । यसैगरी बजेट तथा मौद्रिक नीतिमा घोषणा भएका राहत तथा पुनरुत्थानका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि सम्बन्धित निकायको ध्यान आकृष्ट गराउन आवश्यक छ । आर्थिक पुनरुत्थानको काम अगाडि बढेमात्र अर्थतन्त्र चलायमान भई समग्र अर्थतन्त्रले गति लिन सक्छ ।
डुइङ बिजनेसको लागत घटाउन अति आवश्यक छ
अहिले देशमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले गर्दाखेरि आमजनतालाई धेरै नै समस्या पारेको छ । यसबाट हाम्रो मुलुकमात्र नभएर विश्व नै संकटको अवस्थामा रहेको छ । यसले निजी क्षेत्रलाई समेत ठूलो असर पारेको छ । यो अवस्थामा अहिले कोरोनाले थिचिएको आर्थिक अवस्था उठान गर्नका लागि निजी क्षेत्र र सरकार एउटा रथको दुई पाङ्ग्रा भएर अगाडि बढ्नुपर्छ । यसलाई माथि उठाउनका लागि मौद्रिक नीतिबाट पनि केही सम्बोधन गर्न खोजिएको छ । तर, कार्यान्वयन गर्ने कुरामा ढिलासुस्ती हुने प्रचलन रहेको छ । यसलाई छिटोछरितो गरेर गइयो भने पक्कै पनि हाम्रो देशबाट युवा दाजुभाइ बिदेसिएका छन् । उनीहरूले सिकेको सीप नेपालमै गर्न पाउने मौका पाउँछन् । सरकारले स्टिमुलस (राहत) प्याकेज ल्याएको छ । यसले कतिपय युवा विदेश पलायन भएको पनि सुन्न पाइएको छ । विशेषगरी अहिले हाम्रो मुुलुकमा आर्थिक उन्नतिको कुरा गर्दा डुइङ बिजनेसको लागत धेरै छ । यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय अन्य उत्पादनको सन्दर्भमा सार्क मुलुकहरूसँग हामीले प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेका छैनौं । यसका लागि डुइङ बिजनेस लागत कसरी घटाउने, निजी क्षेत्रसँगै बसेर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । किनकि जबसम्म लागत घटाउन सकिँदैन । अन्तराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गर्न सकिँदैन । स्वदेशमा पनि अन्य मुलुकबाट आएका सामानलाई विस्थापन गर्न गाह्रो हुन्छ । डुइङ बिजनेस लागत घटाउन अति आवश्यक छ । यसको असर सरकारी क्षेत्रमा पनि परिरहेको छ । उत्पादन र बजार ल्याउने बिचौलियाले कर पनि तिरेको हुँदैन । कतिपय सरकारी जागिरदार भएका र व्यवसायीले पनि आफ्नो कमाइको कर तिर्नुपर्छ भने डुइङ बिजनेस गर्नेले ४० औं लाख टेबुलमुनिबाट कमाइरहेको हुन्छ । करको दायरामा छैन । सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर बिचौलिया हटाउन सकियो भने लागत घटी करको दायरा पनि बढ्छ ।
यो बिचौलिया प्रणाली हटाउनका लागि निजी क्षेत्र र सरकार मिलेर हातेमालो गर्नुपर्छ । यसमा लाग्नका लागि नेपाल चेम्बर अफ कमर्स तयार रहेको छ । सबै एकजुट भएर सरकारलाई झकझकाएर यसलाई हटाउने बाटोमा लाग्न अति आवश्यक छ । अहिले मुलुकमा नगद कारोबारलाई कसरी वृद्धि गर्न सकिन्छ । एउटा कानुन नै होस् । कुनै पार्टीले भुक्तानी गर्दाखेरि उसको कारोबारमा दिएको चेक समयमा भुक्तानी भएन भने त्यो व्यक्ति, संस्थालाई कालोसूचीमा राख्ने गर्नुपर्छ । बैंकमा ऋण लिएर समयमा तिर्न सकेन भने कालोसूचीमा राख्छ भनेजस्तो यस किसिमको व्यवस्था गर्नुपर्छ । डिजिटल प्रणालीमा जानुपर्छ । यसका साथै मुलुकको आर्थिक उन्नतिका लागि सबै सरोकारवाला मिलेर सहकार्य गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रको सुझाव सही ठाउँमा लागू होस् ।
सम्भव छ नेपाली बिजुली बिक्री
भारत सरकारले हालै नवीकरणीय ऊर्जा खरिद दायित्व (आरपीओ) जारी गर्दै आगामी आठ वर्षभित्र जलविद्युत्मार्फत् नै
दोधारा-चाँदनी सुख्खा बन्दरगाहको गुरूयोजना तयार
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा निर्माण हुन लागेको नेपालकै ठूलो सुख्खा बन्दरगाह तथा एकीकृत जाँच चौकीको गुरुयोजना तयार
कार्यक्रम सम्माननीयका नाममा, उपलब्धि न्यून
पछिल्लो समय मुलुकमा राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीका नाममा कार्यक्रम राख्ने प्रचलन बढ्दै गएको दखिन्छ । सांकेतिक
विविधता समेट्छौं हामी ?
१. छुवाछूत अनि छुवाछूतभित्रको छुवाछूत हाम्रो वास्तविकता, दोहोरो छुवाछूत कसरी विविधताभित्र समेट्नु ? अनि चलिरहेको